स्तम्भ – पाठक संवाद – “विनोद उदय” — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » देवदह विशेष, बिचार/ब्लग → स्तम्भ – पाठक संवाद – “विनोद उदय”
May 23, 2017१५१३ पटक
स्तम्भ – पाठक संवादसिक्न र सिकाउनको लागि पढ्छु
देवदह, सितलनगर निवासी कमलप्रसाद न्यौपाने देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, सितलनगर र ज्ञानोदय रात्री मा. वि., वुटवलमा प्राध्यापन गर्छन् । दिर्घायु नेपाल नामक संस्थाको केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका उनले ध्यान तथा योग सिकाउने काम पनि गर्छन् । उनी जति अध्ययन गर्छन्, गहन तरिकाले अध्ययन गर्छन् । ‘देवदह रिडर्स क्लब’मा पनि आबद्ध रहेका उनीसंग उनको पठन जीवनसंग केन्द्रित रहेर मैले छोटो संवाद गरेको छु । हाम्रो बातचित जस्ताको तस्तै – विनोद उदय ।
प्रश्न ः अहिले के पढ्दैहुन्छ?
उत्तर ः ओशो रजनिशको ‘शिक्षामे क्रान्ति’ पढ्दैछु । उत्तरार्धमा आइसकेको छु ।
प्रश्न ः तपाई किन पढ्नुहुन्छ?
उत्तर ः बिशेषतः ज्ञानको वृद्धि गर्न तथा सिक्न र सिकाउनको लागि पढ्छु । समाजको समग्र अध्ययन गर्नका लागि पनि पढ्ने गर्छु ।
प्रश्न ः अध्ययन तपाईको रुचि हो वा आवश्यकता?
उत्तर ः बढीजसो त अध्ययन मेरा लागि रुचि नै हो । शिक्षण पनि गर्ने भएको हुँदा कतिपय सन्दर्भमा यो आवश्यकता पनि बनिदिन्छ ।
प्रश्न ः कस्ता पुस्तक प्रति विशेष रुची छ तपाईको?
उत्तर ः बिशेषगरी आध्यात्मिक र दर्शनका पुस्तकप्रति बढी रुचि छ । साहित्यिक पुस्तकहरु पनि पढ्छु । पुस्तकप्रतिको रुचिमा उमेरगत परिवर्तनले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ ।
प्रश्न ः सम्झन लायक केही पुस्तकहरु?
उत्तर ः यस्ता कृतिहरु त धेरै छन् तर नामै लिनु पर्दा ओशोको ‘सम्भोगबाट समाधितिर’, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ‘सुम्निमा’, घनश्याम खड्काको ‘निर्वाण’, पारिजातको ‘शिरिषको फूल’ आदि छन् ।
प्रश्न ः झुर किताबहरु प्नि होलान् नि?
उत्तर ः मैले पुस्तक छनोट गर्दा बिशेष ध्यान दिन्छु त्यसैले पछुतो नै लाग्ने खालका किताबको फेला परेको छैन आजसम्म ।
प्रश्न ः अध्ययनको बानी कसरी लाग्यो?
उत्तर ः विद्यार्थी अवस्था देखि नै म जिज्ञासु प्रकृतिको थिए । नयाँ कुरा जान्न चाहने स्वभाव थियो । जीवन जगतका यावत् पक्षहरुका बारेमा ज्ञान हासिल गर्नु छ भने अध्ययन गर्नैपर्छ । यसै मान्यताले म अध्ययन तर्फ लागे । मेरो पेशाले पनि मलाई अध्ययनशील बनायो ।
प्रश्न ः पढ्नुले जिन्दगीमा केही फरक पार्दो रहेछ?
उत्तर ः धेरै फरक पर्दो रहेछ । पुस्तकबाट नै विविध बिषयका ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ । अध्ययन गर्ने बानी विकास नगरेको भए मानव मनका अभिव्यक्ति, मानव सभ्यताका उपलब्धी र जीवन जगतका सारभूत पक्षका बारेमा अनभिज्ञ नै रहने थिए । त्यसैले पढ्नुले जिन्दगीमा धेरै फरक पार्छ ।
प्रश्न ः पढ्न मन नगर्नेहरुलाई कसरी उत्प्रेरित गर्नुहुन्छ?
उत्तर ः ‘स्वाध्यानात् मा प्रमदः’ अर्थात् मानिस स्वाध्यायानबाट कहिल्यै विमुख हुनुहुदैन । हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, पहिचान लगायत समग्र पक्षको जानकारी पुस्तकबाटै प्राप्त गर्न सकिने हुँदा पढ्ने बानीको विकास गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । त्यसका साथै सामुहिक रुपमा हुने पुस्तक विमर्श कार्यक्रममा सहभागी हुन समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
प्रश्न ः पढेर गुमाएँ भन्ने केही छ?
उत्तर ः पढेर केही मात्रामा भएपनि अज्ञानता गुमाएँ । संस्कार र संस्कृतिका नाममा प्रचलित गलत मान्यतालाई सत्य ठान्ने मानसिकता गुमाएँ । असल कुरा केही पनि गुमाइन ।
प्रश्न ः हामीले देवदहमा केही महिना अघि रिडर्स क्लब गठन गरेका छौ । तपाई पनि त्यसमा सामेल हुनुहुन्छ । देवदहको पछिल्लो पठन संस्कृतिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
उत्तर ः देवदहको पठन संस्कृति व्यक्तिगत रुपमा मात्रै नभएर संस्थागत रुपमा क्रियाशिल भएको छ । यो अति प्रशंसनिय काम हो । असल काम प्रारम्भ गर्न सरल छ तर त्यसलाई निरन्तरता दिन जटिल हुन्छ भनेझै शिशु अवस्थामा रहेको देवदह रिडर्स क्लबलाई अझै व्यापक बनाउनुपर्छ । एक व्यक्तिले धेरै पुस्तक छोटो समयमा पढ्न नसकिने हुँदा देवदह रिडर्स क्लबका माध्यमबाट पढेका पुस्तकका बारेमा विचार आदानप्रदान गर्ने संस्कृति विकास गर्दा ज्ञानको क्षितिज फराकिलो त हुन्छ नै साथै भावी पिढीका लागि समेत अनुकरणीय हुन्छ तसर्थ देवदहका समस्त अध्ययनशील मित्रहरुलाई सक्रियता बढाउन अनुरोध गर्दछु ।